★ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော ထုတ်လုပ်သူ ★ 1510 25 Nylon Filter Bag ၊,ပိုလီစတာ,PP Filter အိတ် ★ Nylon Filter Mesh မျက်နှာပြင်
Nylon Filter Bag ၊
ဖုန်မှုန့် Filter အထည်
Micron Filter အိတ်
★7ပို့ဆောင်မည့်ရက် _★_ လှည့်​လည်​မြန်​ခြင်း _★_ရေအောက်ပိုင်း _★_ အမြတ်များများ ★
အိမ် > Filter Bag Fabric -
COX Filter Bag Fabric သည် 12~20oz ဖုန်မှုန့်ဇကာထည်များကို ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် တင်ပို့ခြင်းတွင် အထူးပြုသည်။, 0.1~ 200micron ခံစားမှုအမျိုးအစား micron စစ်ထုတ်ထည်နှင့်ယက်လုပ်ကွက်ဇကာထည်(25~2000micron)စက်မှုလုပ်ငန်းဖုန်မှုန့်များကိုဖယ်ရှားရန်အတွက် အရွယ်အစားပြည့်ဖုန်မှုန့်နှင့် မိုက်ခရိုဇကာအိတ်, အရည်စစ်ထုတ်ခြင်းနှင့်ရေကုသမှု.
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဇကာထည်နှင့် အိတ်သည် တံဆိပ်အများစုကို ကောင်းမွန်စွာ အစားထိုးနိုင်သည်။:Eaton, Cuno, MAHLE, FSI(ကျွမ်းကျင်သူများကို စစ်ထုတ်ပါ။), GAF, Red Baron, မိုက်ခရို, ပိပိရိရိ, Ronningen-Petter, Hayward, Loeffler, Rosedale, 3အမ်, ဆီးစစ်ပါ။, နိုက်နှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းစံဇကာအိမ်ရာများ.
12အောင်စ,14အောင်စ,16အောင်စ,17.5အောင်စ,18အောင်စ,20အောင်စ,22oz polyester ဇကာထည်, nomex ဇကာထည်, ဖိုက်ဘာမှန်ဇကာထည်, pps ဇကာထည်. အရွယ်အစား အပြည့်အစုံဖုန်မှုန့်စစ်ထုတ်ခြင်းနှင့် ကုသမှုအပြီးသတ်ခြင်းသည် သင့်လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေနှင့် လိုက်ဖက်ပါသည်။.
Needle Felt Filter အထည်များ:
PP Filter အထည် Polyester Filter အထည် Nomex Filter Fabric Acrylic Filter အထည် PTFE Filter အထည် P84 Filter အထည် Fiberglass Fabric Filter PPS Filter Fabric Antistatic Polyester Filter အထည် PTFE အမြှေးပါး Filter အထည်အလိပ် ရေစိမ်ခံသော & oilproof Filter အထည်
Felt အမျိုးအစား polyester နှင့် PP ဇကာအိတ်, ယက် PA(နိုင်လွန်,mo) နှင့် polyester mesh filter sock နှင့် aquarium filter bag အတွက် တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် သုံးသည်။, ထို့နောက် & WVO ဇီဝဒီဇယ်ဇကာ လက်စွပ်များ, အနည်ဇကာအိတ်, dewatering filter အိတ်, ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီဇကာအိတ်. အစွန်းခံသံမဏိ, ကာဗွန်သံမဏိ, ပလပ်စတစ်လည်ပင်း, ကြိုးတစ်ချောင်း, ပစ္စည်းရွေးချယ်ရန်အဆင်သင့်.
အပ်နှင့် ယက်အမျိုးအစား အရည်စစ်ထုတ်အိတ် နှစ်မျိုးလုံးကို အရွယ်အစား အမျိုးမျိုးနှင့် မိုက်ခရို အမျိုးမျိုး အကွာအဝေးတွင် ရရှိနိုင်ပါသည်။. ပုံမှန်အရွယ်အစားအိတ်(4″x၈″, 4″x၁၄″, 7″x၁၆″, နှင့် ၇″x၃၂″) စျေးကွက်ရှိ filter အိတ်အများစုနှင့်ကိုက်ညီရန်ရရှိနိုင်သည်။. စိတ်ကြိုက် filter အိတ်များကိုလည်း ဖောက်သည်များအတွက် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်ပါသည်။’ သတ်မှတ်ချက်များ. ခံစားမှုအမျိုးအစားအတွက် စစ်ထုတ်မှုနှုန်းသည် 0.1~200micron ဖြစ်သည်။, ယက်လုပ်မိုက်ခရိုဇကာအိတ်သည် 1 ~ 2500 မိုက်ခရိုရွန်ဖြစ်သည်။.
Felt Micron Polyester & PP Filter အိတ်များ
Filtration Felt သည် စျေးသက်သာသော တစ်ခါသုံးမီဒီယာတစ်ခုဖြစ်ပြီး အတိမ်အနက်မှ စစ်ထုတ်မှုအရည်အသွေးများနှင့် မြင့်မားသောအစိုင်အခဲများကို တင်ဆောင်နိုင်မှုရှိသည်။. Needle Micron Filter Sleeves များတွင် ရရှိနိုင်ပါသည်။ PES(ပိုလီစတာ) နှင့် Polypropylene(PP). Filtration Felts သည် ဇကာမျက်နှာပြင်မှ ဖိုက်ဘာများ ရွှေ့ပြောင်းခြင်းကို လျှော့ချရန် စဉ့်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော သို့မဟုတ် သီဆိုထားသော အပြင်ဘက်အချောဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။. Welded Filter Bags နှင့် Sewn ပြုလုပ်သည့် အမျိုးအစား နှစ်မျိုးစလုံးသည် Filter များနှင့် ကိုက်ညီရန် ရနိုင်ပါသည်။. Filtration Rate တွင် ရရှိနိုင်ပါသည်။ 0.1, 0.5, 1, 5, 10, 25, 50, 75, 100, နှင့် 200 Micron.
ရက်ကန်းနိုင်လွန် & Polyester ရေစစ်ခြေအိတ်များ
နိုင်လွန်(mo), ပိုလီစတာ(PE/PES) နှင့် အစွန်းခံသံမဏိ အသုံးအများဆုံးပစ္စည်းဖြစ်သည်။. Monofilament Mesh သည် တစ်သမတ်တည်းရှိသော ချွေးပေါက်အရွယ်အစားများကို သေချာစေရန် တိကျသော ယက်လုပ်မှုဖြင့် အလွန်ခိုင်မာသော ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။. ဤစစ်ထုတ်အိတ်အမျိုးအစားသည် အပလီကေးရှင်းများစွာတွင် ပြန်သုံးနိုင်သည်။.
နိုင်လွန်/NMO စစ်ထုတ်ကိရိယာ နှင့် အရည်ကွက် Polyester ဇကာခြေအိတ်များတွင် ရေသန့်စင်ရန်အတွက် ကွက်အရွယ်အစား အပြည့်အစုံရှိသည်။, paint strainer filter အိတ်များ. ၎င်းသည် aquarium micron mesh filter အတွက် အကောင်းဆုံးမီဒီယာလည်းဖြစ်သည်။. ၎င်းသည် အပ်အမျိုးအစား မိုက်ခရိုဇကာအိတ်များထက် ကြိုတင်စစ်ထုတ်အိတ်ကဲ့သို့ စစ်ထုတ်မှုစွမ်းရည် ပိုမိုမြင့်မားသည်။. အနည် နှင့် dewatering filter အိတ် Pond Water Filter Bag သို့မဟုတ် Filtration Pump Socks များတွင် Pre-filter အဖြစ် အများဆုံးအသုံးပြုကြသည်။(1 &5micron အနည်စစ်ထုတ်အိတ်), ဒီအိတ်အမျိုးအစား’ ပစ္စည်း PP/polyester monofilament သို့မဟုတ် multifilament ကို ရွေးချယ်ပါ။, နိုင်လွန်ကွက်အထည်.
သံမဏိဇကာကွက်များကို ဆီစစ်ထုတ်ခြင်းအဖြစ် တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသုံးပြုသည်။, bag filter နှင့် အခြားသော chemical liquid filtration များ.
PE(PES/Polyester) Filter Bag ၊ တွင်ရရှိနိုင်သော filter များ 25, 30, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 500 မိုက်ခရို.
mo(နိုင်လွန်) filter bag filters များပါရှိနိုင်ပါသည်။ 25, 30, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 500,1000, 1500, 2000, 2500 မိုက်ခရို.
Stainsless Filter အိတ်များ filtration rate ရရှိနိုင်သည်။:5, 10, 25, 50, 75, 100, 200, 500မိုက်ခရို.
နိုင်လွန် & Polyester မျက်နှာပြင်ကွက်
နိုင်လွန်စစ်ထုတ်သည့်မျက်နှာပြင်ကွက်နှင့် monofilament polyester mesh အထည်များတွင် ကျယ်ပြန့်စွာ filtration application ရှိသည်။, water fluid filtration media လိုမျိုး(နိုင်လွန်စစ်အောင်အိတ်) filtration media အဖြစ်, အိတ် filtration, မျက်နှာပြင် filtration, pool filter အိတ်
ပုံနှိပ်စခရင်ကို တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် သုံးကြသည်ကိုလည်း သိသည်။(အဖြူ/အမည်း/အဝါကွက်များကို ရွေးချယ်ပါ။).
စစ်ထုတ်အိတ်များနှင့် Filter အထည်များသည် နိုင်ငံတကာဈေးကွက်ရှိ ပစ္စည်းများနှင့် ဆင်တူကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ အာမခံပါသည်။. ISO စနစ်များကိုအခြေခံသည်။, တရုတ်နိုင်ငံရှိတရားဝင်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်, စစ်ထုတ်ထုတ်ကုန်အားလုံးသည် စက်မှုဘေးကင်းလုံခြုံရေးစနစ်အောက်တွင်ရှိပြီး စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးစွဲမှုအတွက် သင့်လျော်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့အာမခံနိုင်ပါသည်။.
COX Filter Bag Fabric သည် အရည်စစ်ခြင်းအတွက် စံချိန်စံညွှန်းနှင့် စိတ်ကြိုက် Filter Bags အပြည့်အစုံကို ထုတ်လုပ်ပါသည်။. အပိုအချက်အလက်များတောင်းဆိုရန် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။, ထုတ်ကုန်နှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ တောင်းဆိုချက်များကို တင်သွင်းပါ။, ဖြန့်ဖြူးသူကိုရှာရန်, သို့မဟုတ် မည်သည့်မေးခွန်းများနှင့်မဆို.
75 micron PP/PE/NMO filter bag
5 Micron Nylon Filter အိတ်
Polyester Filter အိတ်
PP Filter အိတ်
နိုင်လွန် Filter Mesh
Oil Absorbing Filter Bag ၊
Nylon Filter Bag ၊ - Nylon Filter Sock - နိုင်လွန် Filter အိတ်များ
အထည်အလိပ်ကို စစ်ထုတ်ပါ။★ ဇကာအိတ်★ filter အထည်★ အထည်များကို စစ်ထုတ်ပါ။★ polyester ဇကာအိတ်★ filter အထည်★ အိတ်ဇကာ★ filter အထည်★ ဖုန်မှုန့် filter အထည်★ kain ဇကာ★ Acrylic Filter ကိုဆိုလိုသည်။★ ဇကာပုဆိုး★ စစ်ထုတ်ခြင်း★ PET စစ်ထုတ်★ kain filter ကိုနှိပ်ပါ။★ ဖုန်မှုန့် filter အထည်★ polyester အရည်★ အထည်ဇကာ★ အရည်ဇကာအိတ်★ အထည်များကို စစ်ထုတ်ပါ။★	دیتا شیت کیسه های فیلتر★ กรองไนล่อน★ 1 mikron ဇကာအိတ်★ 1 micron filter အိတ်★ 1 micron polyester ဇကာအိတ်★ ptfe ဇကာအိတ်★ ဇကာဖြင့်ဖိထားသောအထည်★ pps အလုပ်လုပ်သောအပူချိန်★ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် filter အိတ်★ Nomex Filter Fabric★ nomex ဇကာအိတ်★ nomex အိတ်★ aramid အိတ်ဇကာထည်★ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် ခံစားထည်★ polyester fiber filter အထည်★ နိုင်လွန်ဇကာထည်★ Antistatic Filter FABRICS★ ryton အထည်★ polyester filterbag ထည်သတ္တိ★ Fiberglass Filter အိတ်★